Farmaajo oo dambiile ka dhigtay la-taliye, una dhiibay NISA 'Farey' | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo dambiile ka dhigtay la-taliye, una dhiibay NISA ‘Farey’
Madaxweynaha xilkiisa dhamaaday ee Farmaajo ayaa caawa Fahad Yaasin u magacaabay La-taliyaha Amniga ee Madaxtooyadda, wuxuuna jagadda hogaanka NISA u badalay Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud 'Farey'.
Madaxweynihii muddadu ka dhamaatay Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa caawa sheegay in uu 'aqbalay' istiqaalada uu usoo gudbiyay Fahad Yaasin, asigoo u magacaabay La-taliyaha Amniga ee Madaxtooyadda.
Bayaankaan sadqda dhexe ee Talaaddada lasoo saaray ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud 'Farey' oo haatan ah Taliyaha Nabad Sugidda ee Gobolka Banaadir loo dhiibo hogaanka NISA. Farey ayaa saaxiib dhaw la ah Fahad Yaasiin.
"Madaxweynaha wuxuu aqbalay istiqaalada uu usoo gudbiyay Agaasimahaha Hay’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka (HNSQ) Mudane Fahad Yaasiin, isagoo ku bogaadiyay shaqadii wanaagsanayd ee uu ka qabtay dib u habeynta Hay’adda." ayaa lagu qoray warqaddaan lagu faafiyay baraha bulshada ee Villa Somalia.
Sida ay Keydmedia Online hore usoo qortay, kulan dhex maray Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, iyo Madaxweynihii muddadu ka dhamaatay Maxamed Cabdullahi Farmaajo, ayaa waxaa laga gaaray heshiis.
KON ayaa soo qortay in labada dhinac ay isku af-garteen in Farmaajo aqbalo xilka ka xayuubinta Fahad Yasiin, hayeeshee, Madaxweynihii muddadu ka dhamaatay ayaa ka hor yimid maxakamadeynta taliyihii hore ee NISA, taas oo uu ku adkeystay RW Rooble.
Wixii faah-faahin ah kala soco bogga wararka ee Keydmedia Online